Njikwa Normalizing - Suzhou Bricmaker Automation Co., Ltd.
Ndị ahịa ọ bụghị naanị ịhọrọ onye na-eweta ọrụ nwere ngwa ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, teknụzụ siri ike, ọrụ zuru oke mgbe a na-ere ahịa yana mgbanwe nke ọrụ teknụzụ oge niile. Nke kachasị mkpa, njikwa ha kwesịrị ịnọ ebe iji wusie ike nchịkwa njikwa, ịdabere na ya.
Mee ka njikwa akụrụngwa sie ike iji hụ na akụrụngwa na-arụ ọrụ ọfụma, na-emezi ngwa ọrụ yana njikwa zuru oke, nke a ga-emezi ngwa ngwa teknụzụ na akụ na ụba nke ụlọ ọrụ, mee ka arụmọrụ nke akụ na ụba nke ụlọ ọrụ dịkwuo elu.
Mee ka njikwa njikwa data, akụrụngwa, ike ike, ụgwọ ọrụ, akụrụngwa, ụtụ isi na data ndekọ ọnụahịa ndị ọzọ, njikwa, njikwa.
1.Dị ka iji nkọwa na akwụkwọ ntuziaka na-arụ ọrụ, iji ihe eji eme ihe, machibidoro ibu iji.
2.Nwere ọzụzụ dị mkpa tupu ịmalite ọrụ, na-agbanwe ndị na-eweta ya, site na amaghị ama na nghọta ma rụọ ọrụ dị mma nke mmezi ngwa ọrụ kwa ụbọchị.
3. Ime ụkpụrụ nke ụlọ ọrụ, mezie omume ndị ọrụ, jide n'aka na ọrụ ọrụ na arụmọrụ na-aga n'ihu.
4.Clear ọrụ ụlọ ọrụ, ịhazi ọhụụ ụlọ ọrụ, ịtọlite ​​ọdịnala ụlọ ọrụ, ịmepụta atụmatụ ụlọ ọrụ.
Njikwa merie uru
Ebumnuche njikwa: Companylọ ọrụ na-achụ ogologo ndụ na ike ndụ, kama etu o si buru ibu. N'ezie na-eme ụlọ ọrụ nọgidere na-azụlite.
Ozi ụlọ ọrụ: Bricmaker na-enye gị ezigbo akụrụngwa na teknụzụ ngwọta, iji nyere gị aka inweta uru akụ na ụba ka ukwuu ma ghọta uru ndụ gị bara!